Wallet Tin Box Collectables Custom Tin Box Box Jumlada, China Wallet Tin Box Collectables Custom Tin Box Box Soo -saareyaasha, alaab -qeybiyeyaasha, Warshadda - G STAR TRADING LIMITED
Daasadda baakadaha qurxinta
Daasad baakad Festival ah
Daasadda baakadda cuntada
Daasadda baakadda guriga ku jirta
Mashiinka Mashiinka Sameyn Kara
Heerka iyo Siyaasadaha
Daasad Sameyn Karta
Haamaha Daasadaha iyo Mashiinada Daasadaha Lagu Sameeyo ilaa 2010
Hoyga>Khaanadaha Tin>Daasadda baakadda guriga ku jirta
Wallet Tin Box Collectables Custom Tin Boxes Wholesale
Iyo meesha Asal ahaan: Shiinaha
Magaca Brand: G XIDIG
Number Model: TB0081
Order Tirada Yar ee: 5000PCS
Details Baako: OPP Bag
Waqtiga dirida: Qiyaastii 30 maalmood
Shuruudaha Payment: By T / T, 30% dhigaalka, dheelitirka ka hor rarka
Supply Kartida: 500000000 halkii mont
Wax Weydiin Hada →
This wallet tin box meets international food safety requirements, can directly contact food, and can pass various food safety tests. All our products have passed SGS, Intertek and other third-party inspections many times and meet the requirements of safe food.
Daabacaadda daasaddan waa geedi socod daabacaad dheellitiran. Daabacaadda dibedda waxaa lagu daabacan karaa afar midab (CMYK) ama midabbo pantone ah iyadoo la raacayo baahida macaamiisha, dahaadhka varnish ama saliidda matta. Gudaha daasadda ayaa ku daboolan kara saliid hufan iyo saliid dahab ah. Waxay sidoo kale noqon kartaa daabacaad laba-geesle ah sida ay sheegeen macaamiisha .Dhammaan noocyada qaababka fiican waxaa looga baahan yahay in la daabaco.
Qaabka daabacaadda iyo naqshadeynta waa la beddeli karaa. Qeybta hoose waxay noqon kartaa tilmaamo daabacan iyo koodh bar. Daboolka daasadda ayaa laga samayn karaa xardho kala duwan, iyo saamayn kala duwan sida dariishadda furan ee daboolka daasadda. Waxaan sidoo kale sameyn karnaa leysarka iyo inlayka Saameyn gaar ah sida qodida, iwm, ku soo dhawow baaritaanka!
Product Name Wallet Tin Box Collectables Custom Tin Boxes Wholesale
Waxyaabaha 230mircon ama tinplate dhumucdiisuna kartoo
size 70 * 35 (H) MM
Daabacaadda / Logo Custom
dhismaha daboolka + jirka + hoose
Muunad / Qaab waqtiga Lead ku saabsan 15 maalmood for caaryada exsiting; ku saabsan 20-25days for caaryada cusub (ka dib markii la helay lacag bixinta iyo farshaxanimada xaqiijiyay)
Delivery Time qiyaastii 30-35 maalmood kadib oggolaanshaha muunadda
Term Payment By T / T, 30% dhigaalka, dheelitirka ka hor rarka
Use to pack coins and other household products
1. Dhammaan maaddooyinka wax lagu daabaco ee sanduuqyada / daasadaha, oo ay ku jiraan wax soo saarka, baakadaha iyo kaydinta, waxay buuxinayaan shuruudaha badbaadada cuntada.
2. In kabadan 10 khadadka waxsoosaarka oo buuxa oo otomaatig ah oo loogu talagalay sanaadiiqda daasadaha / daasadaha, hawlgalka OEM ee ay isticmaalaan manipulators, tayada deggan iyo gaarsiinta la hubo.
3. Sanduuqyada daasadaha iyo gasacadaha qasacadaha ayaa lagu soo uruuriyay aqoon isweydaarsi ka caaggan boodh, oo ay ku jiraan qalab kala duwan oo lagu baaro badeecada.
4. Waxaannu khibrad sannado badan u leenahay dhoofinta sanaadiiqda daasadaha ah. Waxyaabaha Tinplate-ka sida daasadaha cuntada ee kala duwan, sanduuqyada hadiyadaha, iwm ayaa si fiican uga iibinaya Yurub, Ameerika iyo dalal kale.
5. Waxaan haynaa muunad qaadis deg deg ah, qiimayaal tartan ah, tayo sare leh, iyo koox maareyn tayo leh oo xirfad leh.
6. In ka badan 1,000 xirmo oo sanduuqa daasadda ah iyo tin baa wasakhaysan ah si loo daboolo baahiyaha wax soo saar ee macaamiisha loogu talagalay baakadaha sanduuqa daasadda.
7. Waxaa jira 10 xirfadlayaal injineero ah oo ku saabsan daasadda daasadda, taas oo si buuxda u buuxisa shuruudaha macmiilka ee habka wax soo saarka ee daasadaha daasadaha
Lambarka 322, Yinqiao Wadada, Shaoxing, Zhejiang, Shiinaha
Xuquuqda daabacaadda © 2021 G STAR TRADING XADDIDAN